United Kingdom, Essex, Colchester, Co1 1qw
Ikhowudi yeposi: I-Co1 1qw
Iimbonakalo: Isiqinisekiso seZero sokuXhasa uKhetho oluFumanekayo, Umgangatho wokuQala, ukuGqibela kwesitayile, Ikhitshi yanamhlanje enezixhobo, indawo evulekileyo yokuhlala, indawo yokuphakamisa, igumbi lamanqanaba akhoyo, indawo yedolophu, indawo engavulelwanga,
Isishwankathelo ** ukhetho oluqinisekisiweyo lokufaka idipozithi ekhoyo ** - Igumbi elitsha leVenkile yeVenkile kwiZiko leColchester High Street- Ikhitshi ehlanganisiweyo enezixhobo zokulungisa izinto eziPhezulu- Efumanekayo nge-Matshi. uphuhliso kwisitalato esiphakamileyo seColchester. Ipropathi igqityiwe ukuba ibe kumgangatho ophezulu xa iyonke kwaye iya kwenza isiseko esifanelekileyo sabantu abangatshatanga okanye isibini esitshatileyo. Indawo yokuhlala inesakhiwo esivulekileyo segumbi lokuhlala elinekhitshi efakiweyo enoluhlu lwezinto zombane ezihlanganisiweyo kunye nezibonelelo ezivela kwiwadi efanelekileyo. Indawo yokuhlala ngokulula inika indawo eyaneleyo ebhedini enkulu kabini kunye nesofa. Okokugqibela, igumbi lokuhlambela likwanamhlanje kuyilo kunye neendawo zokuhlamba. Le ndawo ingaphakathi komda ochukumayo wezinto ezahlukeneyo zendawo, iindawo zokutyela, imivalo kunye neenomdla. Ipropathi ikwindawo efanelekileyo phakathi kwesikhululo sikaloliwe sedolophu kunye nesikhululo sikaloliwe. Esi sakhiwo sakhiwe sinemeko yeefestile zobugcisa malunga nokupheliswa kwengxolo epheleleyo kunika uxolo kwisakhiwo sakho esiphakamileyo sitaladi ukusuka edolophini ephithizelayo. senziwe ukuqinisekisa ukuchaneka kweenkcazo kunye nomxholo, kufuneka sikwazise ngokulandelayo isikhokelo okanye umda. (140) imigaqo yokuhambisa imali-abaqeshi oza kubakho baya kucelwa ukuba bavelise amaxwebhu achongiweyo ngexesha lenkqubo yokumakisha kwaye siya kucela intsebenziswano yenu ukuze kungabikho kulibaziseka ekuvumeni ilungelo lokuhlala. (1) Ezi nkcukacha aziyonxalenye yazo zonke izithembiso okanye isivumelwano. (2) Isicatshulwa, iifoto kunye nezicwangciso zezikhokelo kuphela kwaye aziyomfuneko ngokupheleleyo. (3) Imilinganiselo: Obu bukhulu begumbi eliqikelelweyo bucwangciswa kuphela njengesikhokelo ngokubanzi. Kuya kufuneka uqinisekise ngobungakanani bayo ukuze wanelise ukuchaneka kwazo. (4) Kuya kufuneka wenze eyakho imibuzo malunga nepropati, ngakumbi malunga nempahla ekufuneka ibandakanyiwe / ingabandakanywa kwaye zeziphi izibonelelo zokupaka. (5) Phambi kokuba ungene kulo naliphi na ilungelo lokuqesha kwisakhiwo esinye sezinto ezipapashiweyo, imeko nemixholo yepropati iya kuchazwa kwisivumelwano sokuhlala kunye ne-inventri. Nceda uqiniseke ukuba ufunda ngononophelo kwaye uyavumelana nesivumelwano sokuhlala kunye nayiphi na i-inventri enikezwe ngaphambi kokutyikitya la maxwebhu.
, Co1 1qw
Izikolo ezikufutshane neCo1 1qw